Tontolo Arabo: Ratsy Dikateny Ilay Boky Momba Ireo Arabo Pelaka · Global Voices teny Malagasy
Tontolo Arabo: Ratsy Dikateny Ilay Boky Momba Ireo Arabo Pelaka
Voadika ny 30 Mey 2017 17:20 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, македонски, Français, Español, English
(Fanamarihana: lahatsoratra tamin'ny Jolay 2009)
Vao nivoaka dia efa nisedra olana ilay boky pelaka voalohany indrindra voadika amin'ny teny Arabo taorian'ny namoahana azy mialoha tamin'ny teny Anglisy.
Natontan'ilay mpanao gazety Michael Luongo ary avy eo dia nadikan'ny trano printy Arab Diffusion tamin'ny teny Arabo ilay boky, Gay Travels in the Muslim World (Fitetezanà Pelaka any amin'ny Tontolo Silamo), izay fitambaran'ireo tantara nosoratan'ny vondronà mpanoratra Silamo sy tsy Silamo.
Kanefa dia nosafidian'ilay mpanonta boky ny handika ny teny pelaka ho شاذ, (shaath), izay raha ara-bakiteny dia midika hoe “mpivily làlana” na “veta saina”;- ka nampivarahontsana ireo mpanoratra sy ny vondrom-piarahamonina pelaka mpampiasa ny teny Arabo.
Mitaratra ahiahy iray mivalapatra kokoa io olana manoloana ny dikateny nosafidian'ireo mpanonta boky io, dia ny fomba fiteny ratsy ampiasain'ny media Arabo amin'ny ankapobeny enti-mamaritra ireo olona tia ny mitovy fananahana aminy izany. Nasesik'ireo fikambanana mpiaro ny zon'ny pelaka sy ireo olon-tsotra manerana ny tontolo mpampiasa ny teny Arabo ny fampiasàn'ny media ny teny مثلي (mithlyy)- fomba fiteny iray tsy ahitàna ireo heviny ratsy mifandraika amin'ny shaath.
Mbola zava-pady ny fitiavana eo amin'olon-droa mitovy fananahana any amin'ny tontolo mpampiasa ny teny Arabo, ary tsy ankasitrahan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny.
Milaza ny Bint el Nas, vohikala iray ho an'ireo vehivavy LGBTQ mifandray amin'ny tontolo Arabo izay miezaka manohitra ny endrika ratsy omena ireo tia ny mitovy fananahana aminy, fa:
Tsy manana teny mirakitra hevitra tsara enti-milaza ny fihetseham-po na ny firaisana ara-nofo eo amin'olon-droa mitovy fananahana ny teny Arabo. Ratsy sady manambany ireo fomba fiteny hita anatin'ny teny Arabo ofisialy na mahazatra: ny “shouzouz jinsi” (fiainana ara-pananahana tsy ara-boajanahary na tsy ara-dalàna), ny “loowat” (firaisana ara-nofo eo amin'ny samy lahy, mampahatsiahy ny tantaran'ny Mpaminany Lot ao amin'ny Baiboly na i Lut ao amin'ny Korany), ary ny “sihaq” (firaisana ara-nofo eo amin'ny samy vavy). Na izany aza anefa, nandritra ireo taona namarana ny taonjato faharoapolo, nanomboka nampiasain'ny sasany tamin'ireo mpandinika fiarahamonina sy ireo mpanao gazety izay nanana feon'ny fieritreretana matihanina velona ny fomba fiteny tsara “junusiya misliya” (izay dikateny mitombina ho an'ny fitiavan'olon-droa mitovy fananahana — teny iray izay nampiasaina voalohany tanatin'ireo fiteny Eoropeana 100 taona lasa izay.
Nanangona rakibolana manokana ahitàna ireo fomba fiteny Arabo mirakitra hevitra tsara momba ny fananahana i Bint el Nas, izay azonao jerena eto.
Maro ireo sorena amin'ny tsy firaharahian'ny media tranainy ny fampiasàna ny fomba fiteny tsara tahaka izao, sy ny tsy fahampian'ny fampiasàna azy ireo anatin'ny fiarahamonina. Manamarika i Belphoros, Alzeriana mpitoraka bilaogy, ao amin'ny blaoginy L'Algerie en Rose, fa:
Il existe tres peu de terme en arabe, on n'aime pas nommer les choses, en ignorant les choses on croit les anuler, les nier, mais ca marche pas, c'est de l'hypocrrisie, il faut affronter les choses et avoir le courage de les nommer, essayons d'appeler Un CHAT un CHAT.
Tena vitsy dia vitsy ireo fomba fiteny (momba ny fananahana) amin'ny teny Arabo. Tsy tia manome anarana zavatra isika. Amin'ny tsy firaharahiana azy ireny, mieritreritra isika fa afaka manafoana azy, mandà azy ireny- saingy tsy mahomby, fihatsarambelatsihy izany. Tsy maintsy miatrika ireo zava-misy isika ary manana ny herim-po hanome anarana azy ireny; ndeha hiezaka hiantso ny vody hoe vody.
Les termes qui concerne l'homosexualite’ sont tres pejoratifs, …
Il faut qu'il y ai des termes neutres qui nous identifient, on doit travailler pour traduire les termes, enrichir le dictionnaire arabe, …
Tena manambany be ireo fomba fiteny mahakasika ny fitiavan'olon-droa mitovy fananahana, …
Ilaina ny fomba fiteny tsy miandany mba hiantsoana antsika, tsy maintsy miasa isika mba handikàna ny fomba fiteny tahaka ireny, ary hanatevina ny rakibolana Arabo, …
Manohy ny resany i Belpheros amin'ny fiantsoana ny fandraràna ny fampiasàna ireo fomba fiteny rehetra manambany ny fitiavan'olon-droa mitovy fananahana izay ataon'ny media, sy ny fanoloana azy ireny ho ilay fomba fiteny tsy miandany, mithlyy (ho an'ireo lehilahy tia ny mitovy fananahana aminy) sy mithlyya (ho an'ireo vehivavy tia ny mitovy fananahana aminy).
Tamin'ny 2006, nanoratra ity lahatsoratra ity momba ny fitaterana ny fitiavana eo amin'olon-droa mitovy fananahana any Beirut i Hala Gorani ao amin'ny CNN. Rehefa nanontany ireo olona mpampiasa ny teny Arabo tao amin'ny CNN izy momba ny dikateny tsara indrindra enti-milaza ny ‘pelaka’ amin'ny teny Arabo, dia ireto no valinteny azony:
Nikaokaotra loha ry zareo. “Luti,” hoy ny iray. “Shaz,” hoy ny iray hafa tanatinà mailaka.
Takatry ny rehetra ireo fomba fiteny ireo saingy voadika ara-bakiteny ho “veta saina” na “mpivily làlana” amin'ny teny Arabo.
Raha mampiasa voambolana tsara kokoa ireo trano printy lehibe tahaka ny gazety Libaney Al-Akhbar, izay gazety Arabo tokana miaro ny zon'ny LGBTQ sy mitatitra ireo olan'ny LGBTQ amin'ny fomba tsara, amin'ny ankamaroan'ireo tranga kosa dia manome endrika ratsy ireo pelaka ny media, miverimberina foana ny fampiasàna ireo fomba fiteny ratsy ireo.
Namelona aina lahatsoratra iray avy amin'i Ricky tao amin'ny Gayboyweekly ny Nireblog vao haingana izay, lahatsoratra miresaka ny fampiasàna ny “shaath”, izay anontanian'i Ricky hoe:
الشذوذ بصفة عامة وباختصار هو ان يفعل الانسان شيء ضد طبيعته،فالمجرم شاذ والارهابي شاذ. وللاسف،يطلق بعض الناس لقب شاذ على المثليين،إما عن جهل او عمد،والسؤال المحير: كيف يطلقون لقب شاذ على المثليين ويقولون انهم يفعلون عكس طبيعتهم
Ny maha ‘mpivily làlana’, raha hafohezina, dia ny fanaovana zavatra iray mifanohitra amin'ny toetra voajanahary. Mpivily làlana ireo mpanao asa ratsy, ary mpivily làlana ihany koa ireo mpampihorohoro. Mampalahelo anefa fa dia misy ihany koa ny miantso ireo olona tia ny mitovy fananahana aminy ho mpivily làlana. Mety noho ny tsy fahalalàna izany na tena fanahy iniana mihitsy.
Ny fanontaniana manitikitika dia hoe: Ahoana no ahafahanao manameloka ireo tia ny mitovy fananahana aminy ho mpivily làlana ary milaza fa tsy mifanaraka amin'ny toetra voajanahariny ny fihetsiny?
لقد خلق المثليين بطبيعتهم كما خلق المختلفين جنسيا بطبيعتهم،فالمثليين والمختلفين جنسيا اناس طبيعيين لا يختلفون عن بعضهم لا بالانسانية ولا بالشكل ولا بالطبيعة ….والشاذ الحقيقي هو الذي يسعى دائما لاقصاء الاخر
Noforonina araka ny toetra voajanahariny ireo tia ny mitovy fananahana aminy, tahaka ny namoronana ireo tia ny fananahana mifanohitra aminy araka ny toetra voajanahariny. Samy olona voajanahary avokoa izy roa ireo, tsy misy mahasamihafa azy ireo amin'ny maha-olombelona azy, ny nanamboarana azy na ny toetrany…Ny tena mpivily làlana dia ilay iray izay miezaka hatrany manilika ilay iray hafa.
Nangataka ny ampiasain'ilay mpanonta boky dikateny iray tsy miandany kokoa i Michael Luongo, tonian-dahatsoratry ny Gay Travels in the Muslim World, saingy efa nalefa any amin'ny trano fivarotana ireo boky ary tsy inoana ny hisian'ny fanovàna.
Milaza i Richard Ammon, mpanoratra ao amin'ny Globalgayz ary nandray anjara tanatin'ny fanoratana ilay boky:
“Mampahory … ahy ny mahita fa diso dikateny ny lohatenin'ity boky ity, izay fijoroana vavolombelona tsotra momba ny fiainan'ny pelaka Silamo, ka nampiasàna fomba fiteny manambany ireo pelaka. Mampahory ny mieritreritra fa efa tonga lavitra amin'ny fiadiana ho an'ny zon'ny pelaka sy ny fankatoavana azy ireo isika kanefa dia afa-baraka noho ny mpanonta boky iray ao Jordania tsy mahafantatra ny ataony.”
Na teo aza ny valinteny ratsy manoloana ny dikatenin'ilay lohateny, efa fahombiazana lehibe na ny fandikàna sy fizarana fotsiny ny Gay Travels in the Muslim World amin'ny teny Arabo aza. Koa satria tsy voadika na navoaka amin'ny teny Arabo ny ankamaroan'ireo asasoratra na fahalalàna momba ny fitiavan'olon-droa mitovy fananahana, dia nolavin'ireo avy any amin'ny tontolo mpampiasa ny teny Arabo tsy mahay mamaky na manakatra ireo fiteny avy any Eoropa ny fahatsiarovantena, ny fianarana sy ny fanekena ny tena izay azo amin'ny alàlan'ny fiatrehana lahateny tahaka izao.
Manipika ity manaraka ity i Afdhere Jama, tonian-dahatsoratry ny Huriyah, ao amin'ny blaogin’ilay gazetiboky Silamo pelaka:
aleoko lavitra izy ireo mampiasa ny teny “مثلي”/”mithlee“, izay midika ara-bakiteny hoe “mitovy” (izany hoe, mitovy fananahana). Nefa tena mahafinaritra ny mahita fa misy dikateny arabo ity boky goavana ity, hany ka mety tsy hiraharaha ilay teny ratsy akory ny mpamaky. Hahaliana ahy kokoa anefa ny hijery izay mety ho votoatin'ilay boky… raha oharina amin'ilay lohateny.
‘Famoronana tsingevana eo amin'ireo toetra mifanohitra': tafatafa niarahana tamin'ny mpanakanto Parastou Forouhar
Iràna 22 ora izay
Herintaona taty aoriana, mbola mitohy ny fanoheran'ny Oniversite Boğaziçi
Tiorkia 1 herinandro izay
Lasibatry ny Minisiteran'ny Atitany amin'ny vesatra fampihorohoroana mampiady hevitra ny Kaominina Istanbul
Azia Atsimo 1 andro izay
Afrika Mainty 15 Febroary 2016